Digniinta Musiibada ee Channel Istanbul! Dhulgariirka La Filayay Inuu Dhacdo 9-10 Severity | RayHaber | raillynews
[10 / 01 / 2020] Khadadka Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Karabük, Doolow ka yimid Çankırı, Sleepers ka Sivas	06 Ankara
[10 / 01 / 2020] Ardayda AGÜ waxay ku baran doonaan internship dugsiga Deutsche Bahn	38 Kayseri
[10 / 01 / 2020] Bursaray waxay yareyn doontaa biilka korontada oo laga dhaliyo Solar Energy	16 Bursa
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDigniinta Musiibada ee Channel Istanbul! Dhulgariir La Filayay Inuu Dhacdo 9-10 Severity
02 / 12 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Channel Istanbul, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Digniinta Musiibada ee Channel Istanbul! Dhulgariir La Filayay Inuu Dhacdo 9-10 Severity; Xubin ka ah Akaademiga Sayniska Dr. Naci Görür ayaa soo saartay bayaanno la yaab leh oo ku saabsan mashruuca Kanal Istanbul. Isagoo carrabka ku adkeeyay khataraha uu mashruucu ka abuuri doono Istanbul, Görür wuxuu yidhi, fazla Inta lagu guda jiro qulqulka daloolka, waxaa jiri doona qulqulo xad dhaaf ah, dhul gariir iyo dumin marka loo eego astaamaha dhulka. Haddii dhulgariir la filayo inuu dhaco, afka Marmara ee kanaalada waxaa saameyn ku yeelan doona darnaanta 9-10 waana suurtagal in ay la kulmi doonto waxyeelo culus.
"Khatar toos ah"
Isagoo leh in ku dhawaad ​​1-1,5 bilyan m3 walxaha waa la qodi doonaa oo deegaanka, fauna iyo flora ee aaggan si weyn ayaa loo burburin doonaa, Görür wuxuu yidhi, "Jasiiradaha laga yaabo inay ka samaysan doonaan Marmara. Iyadoo la tixgelinayo nidaamka qaladka firfircoon ee Marmara, shaqadani waxay noqon doontaa mid khatar badan. Inta lagu guda jiro qulqulka kanaalada, waxaa jiri doona qulqulo xad dhaaf ah, dhul gariir iyo dumis marka loo eego astaamaha dhulka.
“9-10 WAA LAGU SAMEYN KARAA MUQDISHO”
Isagoo ogaynaya dhulgariirka suurta galka ah ee ka dhacaya Istanbul, Görür wuxuu yiri, irse Haddii dhulgariirkii la filayay uu dhaco, afka Marmara ee kanaalada waxaa saameyn ku yeelan doona xoojinta 9-10. Waa suurta gal in qaab leh dulqaad aan eheen dulqaadka iyo dhaqdhaqaaqa toosan, sida kanaalka, wuxuu waxyeelo culus ka soo gaari karaa dhulgariirkan (ama kuwa ku xiga).
Görür wuxuu qiimeeyay mashruucan marka loo eego geosiyada iyo dhulgariirrada isagoo la wadaagaya khariidadaha qaarkood oo ku taxan waxyaabaha soo socda
1- Ujeeddada mashruuca: Istanbul Bosphorus si ay u fududaato bixinta maraakiibta, si looga hortago shilalka loona bixiyo dakhli.
2- ROUTE: Waxaa laga qodayaa dooxada u dhaxaysa harada Küçükçekmece-Terkos Lake. Waxay noqon doontaa ballac iyo qoto dheer oo markab keliya uu dhaafi karo.
3-SOIL (Geology): Kanaalka wuxuu jari doonaa Miocene iyo carrurta ka yar, carrada dhibaatada badan leh (qalloocinta) ee gobolka Küçük Çekmece wuxuuna geli doonaa unugyada Eocene-Oligocene markay sii socoto waqooyiga. Dabaqaani wuxuu ka kooban yahay dhagaxyo aad u adag iyo dhagax aad u jilicsan, dhagaxa dhagxaanta leh, dhagxaanta iyo marooyinka Meesha laga soo galo kanaalka Badda Madoow wuxuu ka kooban yahay dhul siman. Haddii kanaalkan la qodayo, waa lagama maarmaan in:
a) Qiyaastii ku dhawaad ​​1-1,5 bilyan m3 alaab ayaa la qodi doonaa. Ka qodista agabkan waxay qaadan doontaa sanado, mashiinka qodista iyo waxyaabaha qarxa ayaa la istcimaalan doonaa, sidaa darteed dooxada iyo bey'ada ku xeeran, faanka iyo flora waa la burburin doonaa.
b) Suuragal maahan in la dhigo shey xajigan oo meel kasta ah. Malaha, jasiirado ayaa laga samayn doonaa Marmara. Iyadoo la tixgelinayo nidaamka qaladka firfircoon ee Marmara, shaqadani waxay noqon doontaa mid khatar badan.
c) Inta lagu guda jiro qoditaanka qadka, waxaa jiri doona qulqulo xad dhaaf ah, dhul-gariir iyo dumin ku xiran guryaha ciidda.
d) Markii laga qodayo heerka badda, kanaalku wuxuu u shaqeyn doonaa sidii biyo mareen, wuxuu baabi'inayaa kaydadka biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee sababa cusbada gobolka.
e) Gobolka u dhexeeya kanaalka iyo Bosphorus wuxuu noqon doonaa jasiirad, sidaa darteed dhammaan nidaamyada gaadiidkaba waa la beddeli doonaa waana adag yihiin. Gaar ahaan dhismayaasha ka gudbi doona kanaalka waxay noqon doonaan kuwo khatar badan oo qaali ah awgood dhererkooda iyo duruufaha dhulka ka jira awgood. Jasiiradda ka baxsashada Thrace sidoo kale waxay noqon kartaa halis militari.
f) Istanbul waxay sugeysaa dhulgariir. Haddii dhulgariir la filayo inuu dhaco, afka Marmara ee Channel waxaa saameyn ku yeelan doona xoogga 9-10. Qaab dhismeedka aan dulqaad lahayn eber iyo dhaqdhaqaaq toosan, sida kanaal, ayaa si xun u dhaawici kara dhulgariirkan (ama kuwa ku xiga).
g) Sida laga soo xigtay masuuliyiinta, waxaa jiri doona magaalo ugu yaraan 3 milyan oo ku wareegsan kanaalka. Tani waxay kordhin doontaa halista dhulgariirka. Caydha xad dhaafka ah micnaheedu waa luminta nolosha iyo hantida.
h) Kanaalka ayaa ku biirin doona Badda Madow, oo ah mid ka mid ah badaha adduunka ee ugu wasakhaysan, iyo Marmara hadda dhimatay. Dhammaan wasakhda warshadaha ee Badhtamaha Yurub waxay buuxin doonaan Marmara.
I) Nidaamka Oceanographic ee Marmara waa la carqaladeyn doonaa iyo isticmaalka oksijiinka ee badda dhexdeeda waa la dardargelin doonaa. Tani waxay adkaynaysaa xaaladaha nololeed inay sii adkaato. Sida la arki karo, mashruuca noocan oo kale ah wuxuu leeyahay lacag hal mar ah halkii la soo celin lahaa. Intaa waxaa dheer, halkii mashruucan ku kici lahaa balaayiin doolar, ayaa la qaban karaa howlo badan oo muhiim u ah dalka. Iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda maanta, taraafikada Bosphorus waa la kormeeri karaa oo si ammaan ah ayaa loo xakameyn karaa. Tani waa mid ka jaban oo waxtar u leh dalka.
Khariiddada Wadada ee Kanal Istanbul
TCDD waxay ku taal wadada tareenka oo leh halis dhulgariir…
Qaybta musiibada ee Istanbul-Izmir Highway…
Nidaamka digniinta dhulgariirka ee waddooyinka tareenada
Isagoo ka hadlaya Seminaarka Dhulgariirka, İmamoğlu, Channel İstanbul…
Waxay noqon laheyd musiibo haddii ay jirtay joogsi tareen (Sawir Sawir)
TIR waxay burburisay heerarka isgoyska ee isgoyska
Facia oo ku yaal Saldhig Tababarka Jarmalka
Facia ayaa hortagtay Waqtigan! Jadwalka Tareenka Denizli-Izmir…
Maalinta Sugitaanka ee Mashruuca Weyn, Channel Istanbul…
Mashruuca Channel Istanbul ee Kiciya Dhulgariirkii La Filayay?
Masiibooyinka Magaalada Istambul ee Dhulgariirka laga filayo Istanbul…
Digniin ka timid TMMOB: Jooji Channel Madness
Ka socota Wasaaradda, Channel Istanbul Alert
Daawadeyso Naci Profile buuxa
Maanta oo Taariikh ah: 11 Janawari 1999 M2 Şişhane-Hacıosman Metro
Khadadka Xawaaraha Xawaaraha Sare ee Karabük, Doolow ka yimid Çankırı, Sleepers ka Sivas
Ardayda AGÜ waxay ku baran doonaan internship dugsiga Deutsche Bahn
Laabashada Renault Hybrid: Soosaarida cusub ee 'Clio E-Tech' iyo 'Captur E-Tech Plug-in'